War - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 4)
Vivid Money wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Pay ee Spain iyo France
Bangiga ugu dambeeya ee ku daray taageerada Apple Pay waa Vivid Money gudaha Faransiiska in kastoo xilligan aan laga heli karin Spain
Aadamiga oo dhan wuxuu soo bandhigayaa barnaamijkiisa 'Podcast' isla maalintaas uu yahay xilli ciyaareedkii labaad
Apple waxay ku dhawaaqday inay bilawday barnaamijka 'Podcast' ee taxanaha Aadanaha oo dhan, kuwa jecel taxanaha.
Haddii kharashka Apple Watch-kaagu sii socdo inuu fashilmo wixii ka dambeeyay cusbooneysiintii shalay, Apple waxay ku dayactiri doontaa bilaash
Haddii lacag bixinta Apple Watch-kaagu sii wado inuu fashilmo wixii ka dambeeyay cusbooneysiintii shalay, Apple waxay ku dayactiri doontaa bilaash. Waa qalad lagu ogaaday qaar ka mid ah taxanaha Apple Watch 5 iyo Apple Watch SE.
Facebook wuxuu rabaa inuu yeesho saacad u gaar ah oo smartwatch ah.
Laga soo bilaabo Facebook si ay u ballaadhiyaan tirada xogta ee shirkaddu ka soo ururiso dadka isticmaala oo ay ku shaqeyneyso smartwatch
Muuqaal cusub oo loogu talagalay Tom Holland filimkiisa Cherry ee Apple TV +
Walaalaha Russo, agaasimayaasha Cherry, ayaa fiidiyoow cusub oo ay soo duubeen filimkooda soo dhigaya kanaalkooda Youtube.
Zuckerberg oo Apple kula murmaya arrimo ku saabsan asturnaanta: "Waa inaan xanuun geynaa"
Kadib isku dhacyo dhowr ah oo dhexmaray Apple iyo Facebook, waxaa la ogaaday in Zuckerberg uu doonayo inuu xanuun ku rido shirkadda uu hogaamiyo Cook.
Intel wuxuu ku majaajiloodaa Macs processor-ka M1
Intel waxay sameysay shaashad xayeysiin ah oo ay ku cambaareyneyso processor-ka Apple ee M1 ee isbarbar dhigaya Windows.
Marc Randolph: "Apple cudur daar uma lahan Apple TV + in looga tago"
Marc Randolph, oo ah aasaasaha shirkadda Netflix ayaa xusay in Apple aysan cudur daar u lahayn inay gadaal uga dhacdo adeegga Apple TV +.
Maalinta Jacaylka, barnaamijka beddelka batteriga ee MacBook Pro iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan idinla wadaageynaa dhammaantiin wararkii ugu fiicnaa toddobaadkan ee aan ka imid Mac.
Lily Gladstone iyo Leonardo DiCaprio ayaa u jilaya filimka Apple TV ee Martin Scorsese +
Aktarada loo xulay jilayaasha filimka Martin Scorsese ee soo socda waa Lily Gladstone, oo jili doonta doorka xaaskiisa Leonardo DiCaprio
Apple wuxuu diiwaangeliyaa dhammaan saddexda Macs oo leh M1s iyo qalab B2002 oo aan la aqoon
Weli ma ogin midka uu yahay aaladda ay u diiwaangashan tahay Apple inuu yahay B2002 oo ay ku soo biireen saddexda nooc ee Mac oo leh M1
Nooca Falanqeynta Teknolojiyada Safari 120 hadda waa la heli karaa
Tilmaamaha tijaabada Apple ee Safari Technology Preview wuxuu ku dhuftey nooca 120 oo leh cilad cillad caadi ah iyo hagaajinta waxqabadka.
Claire Danes waxay badashay Keira Knightley oo taxanahiisu ahayd The Serpent of Essex
Atariishada Claire Danes ayaa badali doonta Keila Knightley taxanaha Essex Serpent, iyada oo ku saleysan buuga isla magaca ay qortay Sarah Perry
Ciyaaraha Epic waxay muddo dheer qorsheynayeen khilaafkooda Apple: "Mashruuca Xorriyadda"
Maamulaha guud ee Epic Games wuxuu cadeeyay in khilaafka Apple lala damacsanaa waqti hore ka hor mashruucii Freedom Freedom.
Apple Watch wuxuu ku dambayn karaa inuu noqdo mid ka mid ah aaladaha caafimaad ee ugu muhiimsan ee abid la sameeyo
Waad ku mahadsan tahay daraasad cusub, Apple Watch wuxuu noqon karaa aaladda caafimaad ee ugu muhiimsan abid ee loo sameeyo isticmaaleyaasha caadiga ah.
Satechi wuxuu soo bandhigayaa laba xeedho oo USB-C ah oo loogu talagalay Apple Watch iyo AirPods
Satechi wuxuu soo saaray xeedho cusub oo USB-C ah oo noo ogolaaneysa inaan ka qaadno Apple Watch dhinac dhinac iyo AirPods dhanka kale ah
Apple iyo Prepear Reach Heshiis ku saabsan Sumadda Calaamadaha Pear-Qaabaysan
Dacwaddii Apple ee ka dhanka ahayd Prepear ayaa la soo afjaray ka dib markii labada shirkadood ay gaareen heshiis waxtar u leh labada dhinac.
Weydii M. Night Shyamalan at AMA on Servant on Reddit
Khamiista soo socota Reddit waxaa jiri doona AMA taxanaha Addoon halkaas oo aad weydiin karto M. Night Shyamalan wixii aad rabto
Apple TV + taxanaha waxay helayaan magacaabis cusub
Adeegga fiidiyowga ee Apple-ka ee qulqulaya ayaa helay 4 magacaabid cusub oo loogu talagalay taxanaha iyo filimada laga heli karo barnaamijkeeda.
Warshadda Mareykanka ee Mac Pro, facade saafi ah
Waxay u muuqataa in warshadda Mac Pro ee Mareykanka aysan ahayn sidii markii hore loo fikiray. Wax soo saarka dhabta ah wuxuu ku yaal Shiinaha.
"Jane" waxay noqon doontaa barnaamij cusub oo carruurta ah oo ka socda Apple TV +
Barnaamijka xiga ee xubnaha ugu da'da yar Apple TV + waa Jane, oo ah taxane ku saabsan dhowrista deegaanka.
Apple waxay adkeysaa shuruudaha dhinacyada saddexaad ee doonaya inay ku iibiyaan Apple Store
Apple waxay si keli keli ah shuruudaha ugu kala duwday shirkadaha saddexaad ee wax soo saarkooda ku iibiya Apple Store.
Dan Riccio "mashruuca cusub" ee Apple waa muraayadaha xaqiiqda dhabta ah
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Dan Riccio uu qeyb ka noqday horumarinta muraayadaha dhabta ah ee Apple lagu kordhiyay.
Apple dib ayey uga fiirsan doontaa waxayna soo celin doontaa $ 500 ee horumariyayaashu ku bixiyeen DTK Mac mini
Apple dib ayey uga fiirsan doontaa waxayna soo celin doontaa $ 500 ee horumariyayaashu ku bixiyeen DTK Mac mini. Caddaalad ma ahayn in markii ay bixiyeen 500 oo doollar, ay soo celiyeen 200 oo keliya.
Google Drive ayaa noo oggolaan doonta inaan la shaqeyno faylasha dalabka
Dhowr bilood gudahood, Google ayaa u oggolaan doonta dhammaan isticmaaleyaasha inay isticmaalaan isku-darka feyl-dalbashada, maahan macaamiishooda oo keliya
Fikradani waxay qiyaaseysaa sida xargaha xargaha ee midabbada kala duwan ay u eg yihiin
Fikrad xiiso leh oo ku saabsan sida xargaha xargaha hal xarig ah loogu sameyn karo midabyo kala duwan
Laba magacaabis oo dheeri ah oo loogu talagalay Ted Lasso, oo hadda ka socda abaalmarinta SAG
Apple TV + taxanaha majaajillada ah ee Ted Lasso wuxuu helay laba magacaabis oo abaalmarin SAG 2021 ah.
Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay soo celiyaan DTK Mac mini A12Z
Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay soo celiyaan DTK Mac mini A12Z. Waxay heli doonaan foojar qiimo dhimis ah oo dhan 200 oo doolar, markay bixiyaan 500.
Emailada Apple-ka ayaa sii socda si loo kordhiyo adeegga Apple TV +
Apple TV + waa bilaash bilo yar oo dheeraad ah dadka isticmaala Apple ee ku raaxeysta adeeggan
Apple waxay soo jeedineysaa tartan kale bisha Febraayo
Apple waxay ku dartay tartan cusub bishaan Febraayo, gaar ahaan bisha Febraayo 14, taas oo ay nagu boorinayso inaan jacayl yar u muujino qalbiyadeenna.
Jilicsanaan hore oo ku jirtay macOS ayaa siin karta mudnaanta xididdada isticmaalayaasha maxalliga ah
Jilicsanaan hore ayaa khatar gelinaysa amniga macOS iyada oo loo marayo sudo, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala maxalliga ah inay xididada u yeeshaan mudnaanta
Ted Lasso ayaa loo magacaabay 2021 Dahabka Dahabiga ah ee majaajillada ugu fiican
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanaha Ted Lasso ayaa loo magacaabay 2021 Dahabka Dahabiga ah ee taxanaha ugu qosolka badan.
Apple TV + waxay arkeen isticmaale 33% ah oo kordhay usbuucaan mahad filimka Palmer
Thanks to filimka Palmer, dhagaystayaasha joogtada ah ee Apple TV + ayaa kordhay 33% usbuucaan
Dhamaadka beta. Microsoft ee loo yaqaan 'Edge browser' ayaa hadda si buuxda ugu deggan Mac M1s
Nooca ugu dambeeya ee biraawsarka Microsoft Edge ayaa hadda loo heli karaa kombuyuutarrada Mac ee leh Apple M1
Apple waxay ka noqotey cusbooneysiinta iCloud 12 ee ku saabsan Windows wixii ku jira cayayaanka
Nooca cusub ee loo yaqaan 'iCloud 12' ee loo adeegsado Windows-ka ayay Apple dib uga noqotay illaa ay ka saxayso dhibaatooyinka xagga amniga ah ee lagu doodayo inay leedahay
Mashruuca 'REJI' ayaa horeyba uga mid ahaa shirkadda Apple.com oo leh waxyaalo u gaar ah
Hindisaha Sinnaanta iyo Cadaaladda ee Apple (REJI) wuxuu leeyahay meel u gaar ah oo lagu sharfo oo laga helo websaydhka Apple.com.
Fortune waxay mar labaad Apple siineysaa magaca shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Fortune waxay dib u soo saartay liistada Shirkadaha ugu Qiimeysan, Apple-na waxay mar kale joogtaa # 1.
Kuwani waa labada sababood ee AirTags aysan wali u gaarin suuqa
Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee uu Prosser soo dhigay bartiisa YouTube-ka, wuxuu ku sheegayaa labada sababood ee Apple wali u sii deyn weyday AirTags
Hadda waad ku raaxeysan kartaa GeForce Now on Macs oo leh processor-ka M1 oo ay ugu mahadcelinayaan Chrome
Hadda waa suurtagal in lagu raaxeysto barnaamijka GeForce Now ee ku saabsan Mac kasta, oo ay ku jiraan kuwa ay maamusho processor-ka Apple ee M1 oo ay ugu mahadcelinayaan Chrome
Dukaanka Apple ee ku yaal Bordeaux (France) wuxuu heli doonaa waji gudaha ah
Warbixin cusub ayaa ka digtay in Apple Store ee ku yaal Bordeaux lagu sameyn doono dib-u-hagaajin gudaha ah sidaa darteed waxay heli doontaa xitaa saacado gaar ah oo dheeri ah
Tufaax Apple ah oo ay dhisteen Jobs iyo Wozniak oo lagu iibinayo $ 1,5 milyan
Tufaax Apple ah oo ay dhisteen Jobs iyo Wozniak oo lagu iibinayo $ 1,5 milyan. Waxay ka mid ahayd 50-kii cutub ee ugu horreeyay ee la soo saaro.
WhatsApp waxay u baahan doontaa Aqoonsiga Face-ka ama Taabashada Taabashada markaad iskula midoobayso Mac
WhatsApp waxay kordhineysaa lakabyadeeda amni marka ay ku isticmaaleyso Mac waxayna weydiin doontaa Face ID ama Touch ID ka hor inta aysan u oggolaan isticmaalkooda.
Apple horey ayey ugu laheyd istuudiyaha magaalada New York barnaamijyada Apple TV + ee Xeebaha Bariga
Apple waxay kireysay xarun 30.000-mitir murabac ah oo ku taal magaalada New York si ay u duubto Apple TV +
75% dadka isticmaala ee soo iibsaday Apple Watch ayaa cusub
75% dadka isticmaala ee iibsaday Apple Watch rubucii ugu dambeeyay ee 2020 waligood midkoodna ma yeelan kahor.
Cook aad buu ugu qanacsan yahay horumarka Apple Silicon
Cook wuxuu aad ugu qanacsan yahay horumarka Apple Silicon. Sharad aad khatar u ah oo xilligan ka sii socota xoog ilaa xoog.
Apple waxay sii wadaa inay soosaarto Mac waxsoosaarka Shiinaha
Apple wax badan oo ka mid ah wax soo saarkeeda wax soo saar ayey ka rari doontaa Shiinaha, ugu horeyn Vietnam, India iyo Malaysia.
Nooca 119 ee biraawsarka Falanqeynta Falanqaynta Safari ayaa hadda la heli karaa
Apple waxay soo saartay nooc cusub oo ka mid ah Safari Falanqeeyaha Teknolojiyada Safari, kaas oo ay ku gaadhayso nooca 119
FaceTime waxay wacdaa diiwaanka fasaxa
Apple wuxuu sharxayaa in FaceTime uu jabiyay dhammaan diiwaanadii isticmaalka xilligan fasaxa
AirPods ayaa ah sameecadaha sameecadaha adduunka ugu iibinta badan adduunka
In kasta oo AirPods ay leeyihiin iibyo kayar iyo kuwa kayarba, haddana waxay weli yihiin hoggaamiyeyaasha iibka ee ku dhexjira waaxdooda Taleefoonnada TWS
Apple wuxuu isku dayay inuu iibsado xuquuqda Top Gun: Maverick ee Apple TV +
Sida nus sano ka hor, Apple TV + wuxuu isku dayay inuu kala xaajoodo iibsiga xuquuqda mid kale oo ka mid ah hordhaca weyn ee 2020: Top Gun: Maverick
"In lala jiro Ibliis", oo ah wasaarado cusub oo loogu talagalay Apple TV +
Apple waxay heshiis la gashay inay abuurto meerisyo ku saleysan buugga In In the Devil, oo ay jilayaan Taron Egerton iyo Paul Walter Hauser.
Dan Riccio ayaa mas'uul ka noqon doona "mashruuc cusub" gudaha Apple
Mid ka mid ah maamulayaasha sare ee wax soo saarka Apple 20-kii sano ee la soo dhaafay, wuxuu si gaar ah masuul uga noqonayaa "mashruuca cusub" ee Apple.
62% macaamiisha Apple TV + ayaa isticmaalaya mudada tijaabada badankooduna ma qorshaynayaan inay cusboonaysiiyaan
Daraasadii ugu dambeysay waxay muujineysaa in dadka isticmaala Apple TV + aysan hada qorsheyneyn inay cusbooneysiiyaan marka mudada tijaabada ay dhamaaneyso
Sawirka George Floyd ee Portland Apple Store ayaa hadda helaya qof qaata
Guddigii ku hareeraysnaa Apple Pioneer Pioneer ee Portland wuxuu ku dhammaaday gacanta hay'adda aan macaash doonka ahayn ee ha toogin PDX
Brie Larson, inuu jilo riwaayadda "Casharrada Kimistariga" ee Apple TV +
Brie Larson, oo ah atariishada hogaamineysa filimka Captain Marvel, ayaa jili doonta taxane cusub oo loogu talagay Apple TV +
Dayactirka shaashadda MacBook Pro 13, taalada Steve Jobs iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Muddo toddobaad ah inay ku dhammaato sidii ay ahayd, waa inaan idinla wadaagnaa warka ku iftiimiyay inaan ka imid Mac, halkan ayay tagayaan
Qaybihi ugu horeeyey ee 4 ee taxanaha "Losing Alice" ayaa hada laga heli karaa Apple TV +
Afarta qaybood ee ugu horreeya taxanaha 'Losing Alice' ayaa hadda laga heli karaa Apple TV +
LG UltraFine 4K kormeeraha ayaa ka baaba'aya Apple Stores ee Yurub
LG UltraFine 4K kormeeraha ayaan hadda laga heli karin Apple Store, isagoo kaliya ka tagaya qaabka 5K iyo Pro Display XDR.
Falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan in usbuuca soo socda aan yeelan doono diiwaan cusub oo dakhliga soo gala saddexdii biloodba mar
Apple ayaa soo sheegi doonta tirooyinka ugu dambeeya rubuc ee usbuuca soo socda iyo rikoor cusub oo seddex biloodle ah ayaa shaki la'aan la filayaa.
Cirbixiyeen. Tani waa sida cinwaanka cinwaankiisa qeybta labaad ee Addoonku
Addoonku wuxuu horeyba u haystaa qeybta labaad ee laga heli karo Apple TV + waxayna umuuqataa in xilli ciyaareedkii labaad xoogaa caajis ah bilowga
Barnaamijka Wadajirka Wadajirka ah ee SMEs ayaa soo afjarmaya 10 sano kadib.
Barnaamijka Ganacsiga Wadajirka ah ee 'SME Venture Venture' ayaa gabagabo ku dhow 10 sano kadib. Waxaa lagu beddeli doonaa Apple Care
Agaasimihii hore ee Warner Bross wuxuu ku biirayaa madaxa suuq geynta Apple TV
Apple waxay shaqaalaysiisay maamulihii hore ee Warnes Bross si ay u horumariso istiraatiijiyadeeda suuq geynta waxyaabaha ay qorsheyneyso inay ku soo bandhigto Apple TV +
Linux hadda si buuxda ayaa loogu shaqeyn karaa Apple Silicon M1 Macs
Xubnaha kooxda Corellium waxay sameeyeen Linux oo ku shaqeeya Mac mini oo leh M1, laakiin weli wax badan ayaa u baahan in la qabto.
Muddo gaaban, ku shubista barnaamijyada iPhone iyo iPad ee ku yaal Mac M1 horey ayaa loo xiray
Shalay, Apple waxay xannibtay hirgelinta codsiyada iPhone iyo iPad ee ku saabsan Mac M1 sida lagu arkay Beta, laakiin dib ayey uga noqotay geeddi-socodka.
Taxanaha Ted Lasso ayaa loo magacaabay laba Abaalmarin oo Cambaareyn ah
Ted Lasso wuxuu noqday rajada xigta ee Apple inuu ku guuleysto abaalmarino cusub oo taxane ah.
Laba iyo tobanka koonfureed waxay soo bandhigaan ParcSlope, oo ah taageero cusub oo loogu talagalay MacBook
Taageerada cusub waxay abuurtay Labo iyo Toban Koonfurta waxay diiradda saareysaa hagaajinta wax soo saarka iyo sawirkeena markaan adeegsaneyno MacBook
Steve Jobs wuxuu joogi doonaa Beerta Qaranka ee Geesiyaasha Mareykanka
Amarka madaxweynaha ee daqiiqadii ugu dambeysay wuxuu xaqiijinayaa Beerta Qaranka ee Geesiyaasha Mareykanka halkaasoo aan ku arki karno Steve Jobs
Kevin Durant's Apple TV + taxane taxane ah oo dhameystiran
Tixda taxanaha ah ee nolosha Kevin Durant ayaa durba xaqiijisay jilaayaasha oo dhameystiran iyo duubistii taxanaha oo ugu dambeyn la bilaabay.
Fikradda (fiidiyowga) ee CarPlay ee gaariga Tesla
Haddii gawaarida Tesla ay maamuli lahaayeen CarPlay, waxay lahaan karaan isdhexgalka aan ku tusno fiidiyowgaan.
Foxconn waxay ku samayn kartaa MacBook-kaaga xiga Vietnam
Shirkadda Apple qeybteeda ugu weyn ee Foxconn si ay warshad cusub uga furato dalka Vietnam halkaas oo MacBookga iyo iPad-ka soo socda lagu soo saari doono
Qaybta suuqa ee AirPods ayaa hoos u dhacday adduunka oo dhan
In kasta oo saamiga suuqa ee AirPods uu hoos ugu dhacay ku dhowaad 10 dhibcood, haddana wali waxay ku xoog badan yihiin suuqa TWS
Soo saaristu waxay bilaabmaysaa xilli ciyaareedkii labaad ee Ted Lasso
Soo-saarista xilli-ciyaareedkii labaad ee taxanaha Ted Lasso ayaa bilaabmay markaa waa bilo yar ka hor intaanan ku raaxeysan karin cutubyo cusub.
Muuqaal cusub oo dheereyn ah ayaa loo furay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee Aadmiga oo dhan
Apple waxay ku soo daabacday kanaalkeeda YouTube filimka labaad ee xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha Bini-aadamka oo dhan.
Bakhaarka Apple DC ee Washington DC ayaa xirmi doona illaa iyo 21-ka Janaayo
Apple waxay go’aansatay in Bakhaarka Apple ee Washington DC albaabada loo laabi doono laga bilaabo Sabtida ilaa 21-ka
Iibinta Mac, Apple Car iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan marka loo eego wararka ku saabsan adduunka Apple. In aan ka imid Mac waxaan soo koobaynaa kuwa ugu fiican
Netflix waxay ku dari kartaa Space Audio dhowaan
Netflix waxay tijaabineysaa Space Audio qaar ka mid ah taxanaheeda iyo filimaan tan iyo bishii Diseembar ee la soo dhaafay
Websaydhka Apple TV + gabi ahaanba waa la dayactiray
Apple ayaa gabi ahaanba dib u habeyn ku sameysay naqshadeynta Apple TV + websaydhka, iyadoo naqshad la mid ah tan aan ka heli karno barnaamijka TV-ga ee Apple TV
Samsung waxay soo bandhigeysaa nalka ay yaalliin goobta loo baabtiisay sida Galaxy SmartTag
Samsung ayaa hadda dhaaftay Apple waxayna soo bandhigtay nalka ay yaalliin goobta lagu baabtiisay Samsung Galaxy SmartTag
LG-kiisa cusub ayaa ah 4K, AirPlay 2 waa la jaan qaadayaa, kharashkiisuna waa $ 2.999
Sharadkii ugu dambeeyay ee LG ee soosaarayaasha waxaa laga helay HU810P, mashruuc la jaan qaadaya AirPlay 2
BMW waxay ku dhawaaqeysaa imaatinka Digital Key Plus sanadka 2022. Nooca la hagaajiyay ee muuqaalka Gaariga Furaha Apple
BMW waxay ku dari doontaa Digital Key Plus sanadka soo socda 2022. Nooca la hagaajiyay ee muuqaalka Gaariga Furayaasha Apple
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Apple ma gaari doono tirada 3 bilyan sanadkan
Warbixinno cusub oo ay soo saareen xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa tilmaamaya in Apple ay gaari doonto saddexda tiriliyan tirada sanadka 2022
Isbedelada shuruudaha ku saabsan dayactirka MacBooks oo leh arrimo daahan lidka-milicsiga ah oo ku saabsan bandhigyada
Apple waxay sii wadaa inay dayactirto Macbooks-ka ay saameeyeen dhibaatada daahan ka-hortagga milicsiga ee shaashadaha inkasta oo ay badashay siyaasaddeeda
Agaasimihii guud ee Intel Bob Swan ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagay shirkadda
Agaasimihii guud ee Intel Bob Swan ayaa shaqada ka tagi doona isagoo ah agaasimaha guud ee shirkadda Febraayo 15, 2021.
Apple waxay bilaabeysaa mashaariic cusub oo sare uqaadaya sinaanta iyo cadaalada bulshada
Apple waxay bilaabeysaa mashaariic cusub oo sare uqaadaya sinaanta iyo cadaalada bulshada. Waxay ku maalgelin doontaa $ 100 milyan dadaalladaan.
Tim Cook iyo Apple si ay maanta ugu dhawaaqaan 'Wax Weyn'
Apple wax weyn ayey u diyaarisay maanta waana in CEO Tim Cook uu wareysi ka qaaday shabakada CBS oo maanta la baahin doono
Iibinta Macs-ku waxay si aad ah ugu kordheen Q2020 XNUMX
Iibsashada Macs si aad ah ayey u kordheen rubuca afaraad ee sanadka 2020. Shaki kuma jiro sababo la xiriira faafida iyo soosaarida Apple Silicon.
CounterPoint waxay tilmaamaysaa in Apple uu hogaamin doono suuqa processor 5nm sanadka 2021
CounterPoint wuxuu ku darayaa Apple inuu yahay kii ugu horreeyay ee qiimeyntiisa ku saabsan adeegsiga 5nm tiknoolajiyadda
CES 2021: Pioneer wuxuu soo bandhigayaa qaataha 'CarPlay Recever' oo leh Muuqaalka Module Xakamaynta Madaxbanaan
Qalabka cusub ee Pioneer soo bandhigay wuxuu u shaqeeyaa si madax-bannaan, sidaa darteed waxaan ku rakibi karnaa qaybta xakamaynta meel ka fog meesha taabashada
Tufaaxa maalinta koowaad ee CES 2021: Asturnaanta waxyaabaha ugu muhiimsan
Apple waxay kujirtay joogitaankeeda maalinta ugu horeysa ee CES 2021 oo leh seddex ogeysiisyo gaagaaban oo ku saabsan asturnaanta iyo dib u warshadeynta
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Tom Holland iyo filimka walaalaha Russo ee Cherry
Filimka cusub ee walaalaha Russo isla markaana uu jilayo Tom Holland, wuxuu horey u heystaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee rasmi ah oo qaab trailer ah.
Ka saar Flash Player, Mac guide, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Qaar ka mid ah wararkii ugu muhiimsanaa toddobaadkan ee aan ka imid Mac-ga oo kooban. Ha moogaan
New Sony Bravia XR TV oo la jaan qaadaya AirPlay iyo HomeKit
Sony waxay ku dhawaaqday in telefishannadeeda soo socda, Bravia XR, ay si buuxda ula jaan qaadi doonaan borotokoolka Apple ee AirPlay iyo HomeKit
Qaybta suuqa ee 'Macs with M1' waxay noqon doontaa 7% bartamaha sanadka
Sida laga soo xigtay shirkadda TrendForce, saamiga suuqa ee kumbuyuutarrada ay ku shaqeeyaan processor-ka Apple ee M1 wuxuu ka socon karaa 0,8% maanta illaa 7% xagaaga.
Hyundai Motors waxay xaqiijineysaa shirarka lala yeeshay Apple ee loogu talagalay Apple Car
Hyundai waxay cadeyneysaa inay xiriiro iyo kulamo la yeesheen shirkada Apple soo saarista gaariga Apple
U dalacsiinta dib ugu noqoshada jaamacada: Australia, New Zealand, South Korea iyo Brazil
Apple wuxuu bilaabay inuu dib ugu soo celiyo jaamacada Australia, New Zealand, South Korea iyo Brazil
Markay tahay Janaayo 27, Apple waxay daabici doontaa natiijooyinkeeda maaliyadeed rubuca maaliyadeed ee ugu horreeya
Apple wuxuu si rasmi ah u jadwal u sameeyaa shirkii natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca koowaad ee bisha Janaayo 27
Monica Lozano ayaa ku biirtay guddiga maamulka Apple
Apple waxay ku dhawaaqday in Maamulaha guud ee Collegue Futures Foundation, Mónica Lozano, loo doortay inuu ka mid noqdo ...
Apple waxay na tusaysaa muhiimadda ay leedahay adeegyadu inta lagu jiro aafada
Apple waxay nala wadaagtay xog xiiso leh oo ku saabsan ahmiyada ay leedahay adeegyada shirkada inta lagu gudajiray 2020-kii lasoo dhaafay
Muraayadaha Apple-ga ayaa gala wejiga labaad ee horumarka
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay jariidada maalinlaha ah ee Taiwan ee DigiTimes, muraayadaha Apple ayaa durba u gudbay wejiga labaad ee horumarka.
Apple waxay ku shaqeyneysaa wax ku ool ah oo iswaafajiya GaN-gayaasha
Apple waxay durbaba ka shaqeyneysaa sidii ay u abuuri laheyd xeedho u gaar ah oo loogu talagalay MacBook leh gallium nitride
Dhamaan Bakhaarrada Apple Apple ee UK way xirnaan doonaan 7da toddobaad ee soo socda
Dukaammada Apple Apple ee UK oo dhan waa la xirayaa iyadoo aan laga qaadin 7da toddobaad ee soo socda.
Amiir Harry taxane ku saabsan caafimaadka maskaxda si uu ugu tababaro Apple TV + guga
Bilooyin badan oo dib udhac ah kadib, taxanaha taxanaha ah ee Prince Harry wuxuu soo bixi doonaa guga 2021 Apple TV +
Sannad cusub oo wanaagsan 2021! Caqabada hawsha, koritaanka Apple iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Soo koobid yar oo ah usbuucii ugu dambeeyay ee wararka Apple ee sanadka 2020 iyo usbuuca ugu horeeya ee sanadka cusub 2021
Ka warbixi arrimaha uumiga qaar ka mid ah AirPods Max
Qaar ka mid ah dadka isticmaala AirPods Max waxay ku soo warramayaan dhibaatooyinka uumanka ee sameecadaha dhagaha iyagoo adeegsanaya Twitter.
Prepear iyo Apple waxay doorbidaan inay ku xalliyaan dhibaatooyinkooda maxkamadda ka baxsan
Prepear, oo ah shirkadda leh astaanta pear-u eg, iyo Apple waxay rajeyneysaa in ay gaaraan heshiis ka baxsan maxkamadda oo ku saabsan khilaafka astaantooda.
Amazon ayaa ka horeysa Apple waxayna iibsaneysaa shabakada Wondery podcast
Ugu dambeyntiina Amazon ayaa ka hormartay Apple oo waxay qaadatay Wondery podcast platform.
Patent wuxuu muujinayaa kumbuyuutarka Mac oo leh furayaal dib loo qaabeyn karo iyadoo la adeegsanayo shaashado yaryar
Ruqsad cusub oo la siiyay Apple waxay muujineysaa kumbuyuutar Mac ah oo leh furayaal dib loo habeyn karo iyadoo la adeegsanayo shaashado yar yar oo furaha kasta ah.
Waxaan kubixinay kudhowaad $ 300 milyan dukaanka App-ka Kirismaskan
Apple mar labaad ayey sameysay waxayna markale ku guuleysatay rikoor dakhli oo cusub markan iyada oo loo marayo App Store.
La xaqiijiyay: Apple wuxuu kordhay 88% sanadka 2020.
Apple waxay heshay rikoodh sanadka 2020, ugu yaraan xagga macaashka. Sannadkan aan ka tagnay wuxuu ku kordhay 88%.
AirPlay 2 iyo HomeKit waxay bilaabeen inay yimaadaan TV-yada LG-ka ee 2018
2018 LG TVs horeyba u bilaabay inay cusbooneysiiyaan AirPlay 2 iyo iswaafajinta HomeKit
Dakhliga Mac, Apple Car ee 2024 iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Axadii la soo dhaafay ee sanadkan 2020 oo ma seegi karo isku soo dubaridka qaar ka mid ah wararka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple wuxuu bilaabaa inuu yareeyo boqolleyda guddiyada App Store
Apple waxay go'aansatay inay kalabar dhisto guddiyada hadda jira ee App Store oo dusha ka saaraya horumariyeyaasha qaarkood
Muralka lagu sharfayo George Floy ee Portland Apple Store waa la keydin doonaa
Sawirka George Floy ee Portland Apple Store waxaa ilaalin doona oo ilaalin doona Apple
MGM, istuudiyaha Apple isku dayay inuu iibsado 2018, ayaa mar labaad la iibinayaa
Shirkadda MGM, oo Apple ay wada xaajood kula jirtay inay iibsato, ayaa dib ugu soo laabatay suuqa, sidaa darteed Apple ayaa mar kale xiiseyn karta.
Taxanaha Ted Lasso wuxuu dhammaan doonaa ka dib xilli ciyaareedkii saddexaad
Xilli ciyaareedkii seddexaad ee Ted Lasso wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyay ee taxanahan majaajillada ah ee sida weyn ugu guuleystay Apple TV +
Xubnaha Kooxda Raadinta Quraafaadka Khayaaliga ah Waxay Dareen Ka Leh Amni Daroogada Coronavirus
Taxanaha majaajillada ah ee loo yaqaan 'Mythic Quest' ayaa dhibaato ka haysataa inuu xubnihii wax-soo-saarka dib ugu soo laabto shaqada.
TSMC waxay la saxiixataa Apple amarkiisii ​​ugu horreeyay ee jajab leh teknoolojiyadda 3nm
TSMC waxay la saxiixataa Apple amarkiisii ​​ugu horreeyay ee jajab leh teknoolojiyadda 3nm. Waxay noqon doonaan taxanaha M mustaqbalka iyo taxane ka socda Apple.
Apple waxay xirtaa dhamaan bakhaarada ay kuleedahay Kalifoorniya iyo Boqortooyada Ingiriiska sababo la xiriira coronavirus
Maaddaama uu cudurka dilaaca ah ee 'coronavirus' uu ka dillaacay California iyo cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' ee laga helay Boqortooyada Midowday (United Kingdom), ayaa Dukaammada Apple ay albaabada u laabeen mar kale.
Barnaamijka Zoom ayaa loo cusbooneysiiyay M1 wuxuuna ka saarayaa xadka daqiiqada 40 inta lagu jiro ciidaha Kirismaska
Codsiga wicitaanka ee loo yaqaan 'Zoom video call' wuxuu durbaba la jaan qaadayaa processor-ka Apple Silicon wuxuuna sidoo kale noo ogolaanayaa inaan adeegsiga u isticmaalno bilaash xilliga Kirismaska
Warbixin ay soo saartay dowladda India ayaa Apple ku eedeysay qalalaasaha Winstron
Warbixin ay soo saartay dowladda Hindiya ayaa Apple ku eedeysay qalalaasaha Winstron. Wuxuu leeyahay taas qandaraaslaha ugu weyn.
Apple waxay xireysaa dukaamadeeda Los Angeles sababo la xiriira faafida faafida
Apple waxay xireysaa dukaamadeeda Los Angeles sababo la xiriira faafida faafida. Isla taasna way ka dhici kartaa magaalooyinka kale ee Mareykanka.
Mac leh reboots aan la fileynin, waxqabad caqabad leh iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka xiisaha leh sida dhammaan adduunka Apple oo leh dhowr war diidmo ah iyo kuwo kale oo wax ku ool ah ayaan ka socda Mac
Duubista Bandhiga Subaxnimadu way joogsataa marka kiis coronavirus la ogaado
Mar labaad, duubistii xilli-ciyaareedkii labaad ee Bandhiggii Subaxnimo ayaa la curyaamiyay markii wax wanaagsan laga helay cudurka 'cornavirus'.
Apple waxay ku bixin kartaa wax ka badan hal bilyan doolar VirnetX
Qaybta ugu sarreysa ee u dhaxeysa VirnetX iyo Apple ayaa ah inay aad ugu badan tahay in Apple ay ku bixinayso wax ka badan hal bilyan doolar VirnetX.
Apple waxay hoos u dhigeysaa qiimeynta Macs-ka iyagoo ku beddelaya mid cusub
Apple waxay dib u habayn ku samaysay qiimihii Macs markii ay badeecad duug ah ugu beddelayso mid cusub nidaamkeeda Apple Trade In
Samnuel L. Jakcson wuxuu ku laaban doonaa Apple TV taxanahiisa "Maalmihii ugu dambeeyay ee Ptolemy Gray"
Jilaaga Samuel L. Jackson ayaa ku laaban doona Apple TV si uu u soo bandhigo 6-dhacdo mini-taxane ah oo ku saleysan sheeko uu qoray Walter Mosley.
Apple wuxuu ku dhiirrigeliyaa taxanaha Tehran fiidiyaha "Wadahadal lala yeesho basaas dhab ah"
Kanaalka YouTube-ka ee Apple TV + waxaan ka helnay fiidiyow cusub oo cinwaankiisu yahay Wadahadal lala yeeshay basaas dhab ah oo isku daraya sawirradii taxanaha Tehran.
Filimkii ugu horreeyay ee dokumenteriga Billie Elish ee Apple TV + hadda waa la heli karaa
Shirkadda Apple ayaa soo saartay filimkii ugu horreeyay ee dokumenteriga ah ee Dhibaatada Yar ee Dunida ee heesta Billie Eilish
Xubno Cusub oo Muhiim u ah Isbaheysiga Carwada App
Ku darid cusub, muhiim ah oo sharraxaad u leh Isbaheysiga Cadaaladda ah ee App dhibaato gelinaya.
macOS Big Sur 11.1 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaqeyso shaashad buuxda ee iPhone iyo iPad codsiyada Apple's M1s
Iyada oo la cusbooneysiinayo macOS macruufka ah Big Sur 11.1, barnaamijyada iPhone iyo iPad ayaa ugu dambeyntii ku socon kara shaashad buuxda oo ku saabsan Mac-yada cusub ee leh M1
Tim Cook wuxuu joojiyay mashruuca Apple TV + si uu u abuuro taxane ku saabsan Gawker
Markuu Tim Cook ka bartay ujeedka ah inuu boodhka iyo bahalka kooxda Gawker media la keeno shaashadda yar, isla markiiba wuu joojiyay mashruuca.
Khariidadaha 29W ee waayeelka ah ee Apple ayaan la jaan qaadi karin MagSafe Duo
Kaydka Apple MagSafe Duo nama ogolaanayo inaan isticmaalno xeedho 29W-kii hore si aan uga qaadno labada iPhone iyo Apple Watch
Tim Cook waxaa ka go'an dhaqaale dhexdhexaad ah oo kaarboon ah
Tim Cook wuxuu ka difaacay Qaramada Midoobay muhiimada ay leedahay dhaqaalaha kaarboon-ka-dhex-dhexaadka ah sida Apple ay in muddo ah sameysay.
Mexico kuma raaxeysan doonto Apple Pay ilaa 2021
Tikniyoolajiyadda lacag-bixinta ee Apple, Apple Pay, ma imaan doono Mexico illaa 2021
AirPods Max, Mac waxay ku tijaabisaa M1 iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaad muhiim u ah Apple oo ay weheliso imaanshaha cusub ee AirPods Max iyo warar kale oo caan ah oo ku saabsan dunida Apple
Inta badan shaqaaluhu kuma laaban doonaan Apple Park illaa Juun
Sida ku xusan bayaannada Tim Cook, in badan oo ka mid ah shaqaalaha Apple Park waxay u badan tahay inaysan dib ugu soo laaban illaa Juun 2021
Apple TV + riwaayad jireed ayaa helay 6 xubnood oo cusub
Jilayaasha Riwaayadaha Jirka ah ee Apple TV + ayaa la dhameystiray kadib markii 6 jilaayaal cusub loo xaqiijiyay jilaayaasha.
Adobe Lightroom ayaa hadda loo heli karaa processor-ka Apple M1
Codsiga 'Lightroom' ee Adobe ayaa hadda diyaar u ah in lagu habeeyo processor-yada ARM ee Apple waxaana lagala soo bixi karaa barnaamijka 'Cloud Cloud launcher'
Julia Roberts ayaa ku jileysa taxane ka socda Apple TV +
Juilia Roberts ayaa lagu jilayaa silsiladdii ugu dambeysay ee uu i sheegay, riwaayad ku saleysan sheeko isku magac ah.
Apple Watch ayaa xukuntay suuqa smartwatch rubucii ugu dambeeyay
Apple Watch wuxuu sii wadaa inuu xukumo suuqa iibka smartwatch adduunka oo dhan, hal sano oo dheeri ah isla markaana la mid ah tan iyo markii la bilaabay
AirPods Max ma lahan qalabka U1 inkasta oo ay jiraan warar xan ah
In kasta oo ay jiraan warar xan ah dhowr bilood ka hor, AirPods Max ma keeneyso qalabka 'U1' kaas oo u oggolaanaya isdhexgalka weyn ee qalabka kale.
Apple si loo cusbooneysiiyo algorithm ECG oo leh watchOS 7.2
Iyada oo soo socota watchOS iyo cusbooneysiinta iOS, Apple wuxuu soo bandhigi doonaa nooc cusub oo ah qiyaasta qiyaasta ECG
Dhamaan Bini'aadamka, u cusbooneysii xilli saddexaad
Tixda taxanaha ah ee loo yaqaan 'All Humanity' ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli seddexaad ka hor inta aysan sii deyn tan labaad Febraayo 19.
Waa rasmi: AirPods Max hadda waxaa lagu iibinayaa 629 euro
AirPods Max cusub ayaa hadda la heli karaa. Telefoonada dhagaha culus ee Apple oo wata astaamo iyo qiimo aad u sarreeya
Steve Wilson, oo ka mid ahaa maareeyayaasha ugu sarreeya Apple Podcast, ayaa ka tegey shirkadda
Caajisnimada Apple ee Podcasting-ka ayaa keentay inuu baxo Steve Wilson, oo ah madaxa suuq geynta shirkadda Apple Podcast.
Sawirada muuqaalka ah nooca 'Makintosh Classic' oo wata shaashad hufan ayaa ka muuqda Twitter
Sawirro sida nooc ka mid ah kiiska hufan ee Macintosh Classic oo suuqa ku dhacay 1990-kii
Native Linux on Mac leh M1, Apple Watch diiwaanka iibka, iyo inbadan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka koowaad ee bisha Diseembar ee aan ku soo uruurineyno qaar ka mid ah wararka ugu caansan ee aan ka imid Mac
Dusha sare waa riwaayadda cusub ee cilmu-nafsiga ee ku soo socota Apple TV +
Surface waa mid ka mid ah taxanaha soo socda ee lagu degi doono Apple TV +, oo ah sheeko xariif nafsi ah oo imaan doonta 2022
Amazon ayaa ka horeysa Apple waxayna qarka u saaran tahay inay iibsato Wondery
Amazon Way Ka Hortagi Kartaa Apple Iibsiga Wondery Podcast Platform, The Wall Street Journal Ayaa Yiri
Buugga Hillary iyo Chelse Clinton oo loogu beddelayo taxane Apple TV +
Apple waxay haysatay xuquuqda taxanaha taxanaha ah ee ku saleysan buuga ay qoreen Hillary iyo Chelsea Clinton
Websaydhka marin u helka ee Apple ayaa dib loo habeeyay oo wuxuu ku darayaa fiidiyowyo cusub
Waxay cusbooneysiiyaan websaydhka Apple ee loogu talagalay Helitaanka. Websaydhku wuxuu bixiyaa fiidiyowyo cusub iyo qaab ka wanaagsan oo lagu soo bandhigo macluumaadka
Atariishada Julianna Margulies ayaa kubiirtay showga subaxnimo xilli ciyaareedkii XNUMXaad
Atariishada Julianna Margulies ayaa la jili doonaa xilli ciyaareedkii labaad ee TV-ga Apple TV + taxanaha The Morning Show.
Iibinta Apple Watch ayaa kor u kacday rubucii hore
Iibinta Apple Watch ayaa qarxay rubacii la soo dhaafay iyadoo kororku yahay 75% sanadkiiba.
Acapulco waa majaajillada xigta ee ku soo socota Apple TV +
Majaajillada xigta ee iman doonta Apple TV + waxay noqon doontaa Acapulco waxaana jilaya Eugenio Derbez.
Waxaan horeyba u ogaanay guuleystayaasha inay yihiin codsiyada ugu fiican iyo ciyaaraha App Store ee 2020
Waxaan horeyba u ogaanay guuleystayaasha sida codsiyada ugu fiican iyo ciyaaraha App Store ee sanadka 2020. Wixii iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV iyo Mac.
Apple waxay soosaartaa Qalab Cusub oo Qalabayn ah oo loogu talagalay Display Pro XDR
Apple waxay soo saartay qalab cusub oo lagu hagaajinayo qalabka 'Pro Display XDR Monitor'.
Degel cusub si aad u dhigatid amaradaada Apple xilliga Kirismaska
Apple waxay dooneysaa in sanadkaan aysan kaa dhamaaneyn hadiyada Apple xilliga Kirismaska ​​waana sababta ay u fureyso degelkan u heellan wax ka iibsiga taariikhahaan.
IMac oo leh shaashadda 'retina 5K screen' ayaa horay u soo gurtay Apple
Apple Just Added 5, 2013 and 2014 iMac with Retina 2015K Display to its Vintage Product List. '' Apple oo lagu daray XNUMX, XNUMX iyo XNUMX iMac oo wata Retina XNUMXK Display
Josh Elman wuxuu Apple ka caawin doonaa inuu saadaaliyo kuwa ugu fiican barnaamijyadooda
Apple waxay dooneysaa inay la wareegto mustaqbalka codsiyada, laakiin kaliya kuwa guuleysan doona. Si loo ogaado waxa ay yihiin, wuxuu saxiixay Josh Elman
Iibinta AirPods ee 2021 waxay gaari kartaa 115 milyan oo unug
Hal sano oo dheeri ah, iibinta moodooyinka kala duwan ee AirPods waxay sii wadaan inay jebiyaan rikoorrada, taasoo si cad u caawinaysa Jimcaha Madow.
Maalmaha soo socda, Dukaanka labaad ee Apple ee Koonfurta Kuuriya ayaa albaabada loo furi doonaa, aadna ugu dhow dukaankii ugu horreeyay ee furmay 2018.
Apple Fitness + tababarayaashu waxay dhiirrigeliyaan adeegga kahor bilaabista
Adeegga Apple Fitness + waxay u egtahay inuu bilaabmayo sababo la xiriira ogeysiisyada adeegga ee tababarayaasha
Sidee Bluetooth uga shaqeeyaa iphone-ka iyo sida ay u soo ifbaxday sanadihii la soo dhaafay
Ka hor intaan la soo saarin iPhone-kii ugu horreeyay, taleefannada Nokia ayaa suuqa haystay, taleefannada noo oggolaaday inaan la wadaagno dadka kale ...
WiFi on HomePod mini, Furitaanka Mac ee Apple Watch, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan ku dhownahay bisha Diseembar laakiin sababtaas darteed kama tagi doonno soo koobid yar oo leh waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka imid Mac
Mac-yada cusub ee wata processor-ka M1 waxay la kulmayaan arrimo Bluetooth ah
Mac-yada cusub ee wata processor-ka M1 waxay wajahayaan tiro aad u tiro badan oo la xiriirta isku xirnaanta bluetooth.
Apple wuxuu kordhiyay Apple News + mudada tijaabada ilaa 3 bilood waqti xaddidan
Apple waxay kordhisay mudada tijaabada ah ee majaladda macaamiisheeda, Apple News +, ilaa 3 bilood waqti xaddidan.
Filimka Russo Brothers Cherry wuxuu ka soo muuqday 12-ka Maarso Apple TV +
Filimkii ugu dambeeyay ee walaalaha Russo, wuxuu ku tababaran doonaa Apple TV + Maarso 12, 2021, dhowr toddobaad ka hor inta uusan tiyaatarada jabin.
Jimcaha Madow: Apple Watch SE waxaa loogu talagalay 249 euro
Jimcaha soo socda Jimcaha Madow ayaa si rasmi ah loo xusaa, mid ka mid ah maalmaha ugu rajada badan ee adeegsadayaal badani saadaaliyaan ...
Ilaa lix bandhig oo dibedda ah waxaad ku dari kartaa Mac-yada cusub ee leh M1
Ilaa lix shaashadood oo dibedda ah ayaa awood u leh inay ku taageeraan Mac-yada cusub processor-ka cusub ee Apple Silicon
Waze wuxuu bilaabaa tijaabinta isku xirka muraayadaha cusub ee CarPlay
Apple waxay soo bandhigtay interface cusub oo loo yaqaan 'CarPlay interface' bishii Juun 2019, iyada oo loo marayo qaab dhismeedka WWDC 2019, interface ...
App Store Connect ayaa xirnaan doona laga bilaabo Diseembar 23 illaa 27 fasaxyada
Apple waxay shaacisay taariikhaha marka App Store Connect uusan mar dambe la heli doonin inta lagu jiro fasaxyada.
Arimaha HomePod mini Wi-Fi umana muuqato inaad si dhakhso leh wax u hagaajisay
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ka jira HomePod mini's Wi-Fi xilligan la joogona uma muuqato inaan haysto xal rasmi ah.
Apple Silicon-ku-xirnaanshihiisa eGPUs ma noqon karto mid ku meel gaar ah
Iswaafajinta Apple Silicon ee eGPUs waxay noqon kartaa arrin waqti ku saleysan baaritaanka khabiirada qaar.
Sarkaalka Madaxa Kala-duwanaanta ee Intel ayaa loo gudbiyey shirkadda Apple
Apple ayaa ku dhawaaqday saxiixa Barbara Whye si ay u buuxiso booska Madaxa kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada shirkadda.
Waxay ku maareeyaan JAILBARI asalka HomePod ee ku mahadsan Checkra1n
Xubno ka tirsan kooxda chekr1n ayaa ku guuleystey inay xabsiyada ka dhigaan HomePod asalka ah, iyagoo furaya fursado cusub oo xiiso leh.
Khabiirka cilmu-nafsiga ah ee luminaya Alice premieres Janaayo 22
Markay tahay 22-ka bisha Janaayo, 2021-ka, Apple waxay soo bandhigi doontaa filimka 'Alice Alice', oo ah sheeko-yaqaan maskaxeed oo reer binu Israa'iil ah.
Kani waa Barnaamijka Ganacsiga Yaryar, barnaamijka cusub ee yareeya gudiyada App Store ilaa 15%
Apple waxay u bilaabeysaa barnaamij loogu talagalay kuwa wax dhisa kaas oo ay ku yareyneyso guddiyada 15% kuwa ugu dakhliga yar
Kuwani waa kuwa ku guuleystay abaalmarinta Apple Music Awards
Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha shanta qaybood ee qayb ka ah Abaalmarinta Apple Music 2020
Waxaan ku aragnaa gudaha gudaha HomePod mini mana ahan war wanaagsan
Waxaan horeyba uheynay sawiradii uguhoreeyay ee gudaha HomePod mini iyo dayactirkiisa aan macquul aheyn iyo dhismihiisa adag ayaa la xaqiijiyay
Mariah Carey's Ciyaaraha Gaarka ah ee Kirismaska ​​4-ta Diseembar ee Apple TV +
Mariah Carey's gaarka gaarka ah ee kirismaska ​​ayaa laga daawan doonaa Apple TV + bisha Diseembar 4.
World of Warcraft waxay u shaqeysaa asal ahaan, iyo iyada oo aan lahayn emulator, oo leh Macs oo leh processor M1
Mac-yada waligood laguma aqoon inay yihiin barxad ciyaar, in kastoo taasi is beddeli karto sannadaha soo socda ...
Adobe horeyba wuxuu u haystaa beta-kii ugu horreeyay ee Photoshop oo loo heli karo Mac-yada processor-ka ARM
Beta-kii ugu horreeyay ee Photoshop oo wata kumbuyuutarro ay ku shaqeynayaan ARM hadda waa la heli karaa, in kasta oo ay ka maqantahay shaqooyin badan oo caadiga ah.
Markii ugu horreysay ee Apple Silicon aan la furin ayaa bilaabmaya inay soo muuqato
Markii ugu horreysay ee Apple Silicon aan la furin ayaa bilaabaneysa inay soo muuqato. Waxaan diyaarinay lix ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee ka soo muuqanaya YouTube-ka.
Filimkii ugu horreeyay ee Apple TV + taxane dokumenti ah «Meeraha Habeenku midabkiisu dhan yahay»
Muuqaalkii ugu horreeyay ee taxanaha dokumenteriga ah ee Planet of night oo midab buuxa leh ayaa hadda la heli karaa, oo ah taxane ka soo muuqan doona 4-ta Diseembar Apple TV +
M1 GPU waxay ka fiicantahay GeForce GTX 1050 Ti iyo Radeon RX 560
M1-da GPU waxay ka fiicnaanaysaa GeForce GTX 1050 Ti iyo Radeon RX 560. GP-ga isku dhafan ee M1 wuxuu ka fiicanyahay labadan kaar oo sawiro 75W ah.
Barnaamijka Wareysiga Oprah waxaa kasoo muuqan doona Madaxweynihii hore Obama
Markii uu yimid buugga cusub ee Barck Obama ee dukaamada buugaagta, Oprah ayaa ka faa’iideysaneysa daah-furkan si ay wareysi ula yeelato madaxweynihii hore ee Mareykanka.
Codsiga Apple TV ee hadda loo heli karo Sony TV-yada iyada oo loo marayo Play Store
Abka TV-ga Apple TV wuxuu hadda ku degay Play Store laakiin kaliya waxaa loogu talagalay Sony TV-yada iswaafajinta ee la sii daayay ilaa 2018
Apple iyo kuwo kale, ayaa Waqooyiga Ameerika u horseedi doona hoggaanka isgaarsiinta 20-ka sano ee soo socota
Apple wax badan ayey ka oran doontaa isgaarsiinta adduunka 20ka sano ee soo socota waxayna dooneysaa inay America ka dhigto hogaamiye waaxdan.
AirTags waxay ilaalin doontaa asturnaanta isticmaalaha xitaa haddii aysan ahayn tan ugu fiican
Apple waxay rabtaa inay ilaaliso asturnaanta isticmaalaha markay isticmaasho AirTags, taas oo xitaa noqon karta wax soo saar.
Sawirka Affinity, Designer iyo Publisher ayaa hada la jaan qaada macOS Big Sur iyo Apple Silicon
Codsiyada Sawirka, Naqshadeeyaha iyo Daabacaha ayaa hadda la jaan qaada labada processor-ka Apple ee M1 iyo macOS Big Sur.
Apple waxay tiri HomePod mini calaamadaha ugama tago dusha sare ee alwaaxda
Mini-HomePod-ka cusub calaamado ugama tagi doono dusha alwaaxda la daaweeyay haddii ay ku dhacday asalkii HomePod sida ay sheegtay Apple.
Mac-yada leh M1 waa kuwa ugu horreeya ee taageera Wi-Fi 6
Heerka 'Wi-Fi 6' wuxuu la jaan qaadayaa Macs 'yada leh' M1 'waxayna noqdeen buugaagtii ugu horeysay ee lagu gaaro iswaafajintaan.
Dukaanka Mac App wuxuu horey u aqbalay cusbooneysiinta dalabka ee u baahan macOS Big Sur
Dhammaan codsiyadaas ka faa'iideysanaya astaamaha cusub ee Big Sur iyo Apple Silicon labadaba hadda waxaa loo diri karaa dib-u-eegis
Mac-yada leh M1 ma taageeraan eGPU
Wax walba kuma faraxsana M1 ay soo bandhigtay Apple. Processor-kan cusubi lama jaanqaadi karo eGPUs. Waa dhibaato in laga fiirsado
M1 processor-kii ugu horreeyay ee Mac ee xilligii Apple Silicon
M1 processor-kii ugu horreeyay ee Mac ee xilligii Apple Silicon. Dhacdadii Apple-ka ayaa dhammaatay, oo waxay nagula yaabtay culeyska cusub ee M1.
Sida laga soo xigtay JP Morgan, Apple Silicon-ka cusub ayaa ka jaban kuwa hadda jira
Noocyada cusub ee kumbuyuutarrada Mac ee ay ku shaqeynayaan Apple Silicon-ka ayaa ka jaban kan hadda, ayuu yiri falanqeeye JP Morgan
Pegatron oo dhibaato kula jira Apple ka faa'iideysiga shaqaalaha ee suurtogalka ah
Apple waxay baareysaa kiis la sheegay in shaqaale looga faa'iideystay mid ka mid ah warshadaha Pegatron ee Shiinaha
Dacwadii ay soo gudbiyeen maalgashadayaasha Apple ee ka dhanka ah Tim Cook ayaa la qirtay
Xaakim degmo Mareykan ah ayaa aqbalay dacwad ay u gudbiyeen maal-gashadayaasha shirkadda Apple khasaare dhan milyan-doolar.
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee dhacdada xigta «Hal shay kale»
Maqaalkani waxaan ku tusineynaa sida aad u soo dejisan karto waraaqaha cusub ee dhacdada Hal Wax Ka Badan Nofeembar 10
Beta-kii ugu dambeeyay ee loo yaqaan 'Excel for Mac' wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Silicon
Excel waa codsigii ugu horreeyay ee ka mid ah Xafiiska horayba ula jaanqaaday Apple Silicon, in kasta oo ay weli ku jirto beta.
Waxaad horey u haysatay xusuusinta dhacdadii Apple "Hal Wax Ka Badan" YouTube-ka
Waxaad horey u haysatay xusuusinta dhacdadii Apple "Hal Wax Ka Badan" YouTube-ka. Kaydso ajandahaaga 10/11 markay tahay 19:XNUMX fiidnimo.
Christopher Walken wuxuu ku biirayaa jilayaasha Severance
Jilaaga weyn ee ugu dambeeyay ee kaqeyb gala barnaamijka Apple TV + waa akadeemiyada Oscar Christopher Walken
Dukaammada Apple UK ayaa xirnaa muddo afar toddobaad ah
Dukaammada Apple ee ku yaal Boqortooyada Midowday waxay u xiran yihiin COVID-19 sababo afar toddobaad ah.
Dadka isticmaala Apple One waxay lahaan karaan ilaa 4 TB oo keyd ah iCloud
Iyadoo loo marayo Apple One, meesha ugu badan ee keydinta ee aan ku tirin karno iCloud waxay kordheysaa ilaa 4 TB
Apple ayaa beddeli doonta AirPods Pro oo ay saameeyeen dhibaatooyinka dhawaaqa
Dhibaatada ka dhalatay qaar ka mid ah AirPods Pro markii la joojiyay buuq la dhaqaajiyay: Apple ayaa beddeli doonta AirPods ay dhibaatadu saameysey.
Apple waxay ku xukuntay inay bixiso VirnetX markale khilaafaadka lahaanshaha
Apple waxaa lagu xukumay, markale, inuu siiyo wax ka badan 500 milyan oo doolar VirnetX xadgudub sharciyeed
320 milyan oo isticmaale ayaa ku raaxeysta barnaamijka 'Spotify' maalin kasta
Intii lagu guda jiray rubucii la soo dhaafay, Spotify waxay ku guuleysatay inay ku darto 6 milyan oo macaamiil cusub oo mushahar bixiya adeegga muusikada qulqulka
Heshiiska Amazon iyo Apple ayaa waxaa baaraya Jarmalka
Amazon iyo Apple waxay ku heshiiyeen inay ku iibiyaan alaabooyinka dambe dukaanka hore. Shuruudaha ma noqon karaan kuwo gebi ahaanba sharci ah.
Muuqaalka Luna waa la cusbooneysiiyay si loogu daro taageerada macOS Big Sur
Inta aan sugeyno sii deynta nooca ugu dambeeya ee macOS Big Sur, ragga ku sugan Luna Display ayaa soo saaray cusbooneysiin si ay ula jaan qaadaan.
Apple waxay dooneysaa inay yeelato mashiinkeeda raadinta oo ay la jabsato Google
Apple waxay dooneysaa inay yeelato mishiinkeeda raadinta oo ay la jabsato Google. Xaqiiqdii, waxaan horeyba u aragnaa markaan isticmaaleyno mashiinka raadinta ee iOS 14.
Taxanaha Ted Lasso sidoo kale wuxuu yeelan doonaa xilli saddexaad
Majaajillada caanka ah ee Ted Lasso, oo laga heli karo Apple TV +, ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli saddexaad, inkasta oo aan xilli labaad la duubin.
Casuumad loo fidinayo horumariyeyaasha kalfadhiyada diirada lagu saaray barnaamijka Apple Silicon
Apple waxay u dirtaa horumariyeyaasha casuumaad si ay ula soo xiriiraan kal-fadhiyada barnaamijka ee Apple Silicon
Jon Stewart wuxuu ku soo laabtay telefishanka Apple TV +
Mar labaad waxaan kahadleynaa Apple qorshayaasheeda xaadirka ah iyo kuwa mustaqbalka ee ku saabsan adeegsiga fiidiyowga ee soo qulqulaya. Tan…
Apple waxay ku iibsatay shirkad Isbaanish ah sirdoonka macmalka Vilynx $ 50 milyan
Markii ugu dambeysay ee shirkad ay iibsato Apple waxaa laga helaa shirkadda Isbaanishka ah ee Vilynx
Khariidadaha cusub ee Apple ayaa dhowaan laga heli doonaa Kanada
Kanada waxay ka helaysaa cusbooneysiinta Khariidadaha Apple oo ay ku jiraan muuqaalka Hareeraha Hareeraha. Kordhinta khariidadu waa gaabis laakiin waa joogto
Apple iyo Netflix waxay diidayaan inay bixiyaan 600 milyan ee shirkadda MGM weydiisato inay sii daayaan filimkii ugu dambeeyay ee 007 ah
Ugu dambeyntiina waxay u muuqataa in Apple, sida Netflix, aysan diyaar u ahayn inay bixiso qadarka ay MGM weydiiso sii deynta filimkii ugu dambeeyay ee 007
Dib u furida Carwada Apple Store Valley Carwada ee California
Dukaanka 'Fair Fair Apple Store' ee ku yaal Santa Clara, California, ayaa dib loo furay waqtigii loogu talagalay in la keeno moodooyinka cusub ee iPhone-ka
"Isbahaysiga Cadaaladda App" ayaa laba jibaarmaya tiro bil kaliya ah
Isbaheysiga Cadaaladda App wuxuu kordhiyay tirada shirkadaha ku soo biiray in ka badan 300% wax ka yar bil
Nooca cusub ee watchOS, AirTags, TV Remote oo laga saaray iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka Apple ayaa bilaabaya laakiin imanaya Axadda waana waqtigii la arki lahaa waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka imid Mac, ha moogaanin
Jony Ive wuxuu ku biirayaa Airbnb si uu u abuuro badeecooyin iyo adeegyo cusub
Saxiixii ugu dambeeyay ee Airbnb waxaa laga helaa Jony Ive, oo ah madaxa xafiiska naqshadeynta Apple 30-kii sano ee la soo dhaafay.
macOS waxay u maleyneysaa in Amazon Music ama darawalada HP ay yihiin furin
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay ku andacoodaan in macOS ay ula dhaqmeyso Amazon Music iyo qaar ka mid ah daabacayaasha HP inay yihiin malware oo aysan u oggolaan inay shaqeeyaan.
Amazon waxay tirtiraysaa Apple Card sida habka lacag bixinta
Amazon waxay ka saareysaa kaarka Apple habka lacag bixinta. Wuxuu ka tirtiray koontada isticmaaleha haddii ay ahayd habka lacagtiisa, iyada oo aan suurtagal ahayn in dib loo galo.
WatchOS 7.1 beta 4 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha
Beta-kii afaraad ee watchOS 7.1 ee loogu talagalay soo-saareyaasha ayaa hadda la heli karaa isla markaana xilligan, wali kuma darto muuqaalada cusub
Apple waxay ka codsaneysaa maamulka Trump canshuur dhimista haddii ay ka sameysato jajabkeeda Mareykanka.
Apple waxay ku cadaadineysaa maamulka Trump faa'iidooyinka canshuurta haddii ay ka sameysato jajabkeeda US TSMC waxay diyaar u tahay inay soo saarto Mareykanka.
Apple waxay iibsataa xuquuqda dokumenteriga ah 'Velvet Undergound'
Dukumiintiga xiga ee imanaya adeegga fiidiyowga ee Apple, The Velver Underground, wuxuu sheegayaa sheekada Lou Reed iyo Andy Warhol.
GravityRAT, basaasnimada khatarta ah waxay ku timaadaa Mac-yadayada
Basaasida loo yaqaan 'GravityRAT' ayaa durbaba awood u leh inay ku faafiso Macs ujeedooyin aan nabad ahayn. Waxa ugu fiican ayaa ah inay jirto sida looga fogaado